China Yoga Vanofarira Vanodzidzira Yoga MuBangkok, Thailand vagadziri uye vanotengesa | Mvura yakachena
Yoga Vanofarira Vanodzidzira Yoga MuBangkok, Thailand
Thailand ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa pasi rose yekudzidzira iyo yoga.
Nei Uchifanira Kudzidzira Yoga muThailand
Mhando dzakasiyana dzevadzidzisi veyoga vanoita yavo kutenderera kuburikidza neThailand nenzira inoshamisa kazhinji. Varairidzi vepasi rose vakatomboita Thailand musha wavo! Izvi zvinovimbisa kuti kuchave nehupfumi hweyoga mashopu uye zvidzoreso zvekusarudza kubva chero paunoronga rwendo rwako.
Uyezve, varairidzi ava vanogadzira nzvimbo dzinopararira dzeyoga. Iwe uchanzwa uri pamba chaipo panguva yako yekutanga kushanya kune iyo studio studio muThailand. Hazvina kujairika kuti makirasi aende kunodya pamwe chete mushure mekudzidzira, uye kugamuchirwa, kudzikama sabai sabai mafungiro eThailand anoshanda kune yayo yogis.
Heano matatu eakanakisa Thailand Thailand Maguta, uye kwaunogona Kudzidzira:
Thailand ndeye mashiripiti zvechokwadi, uye imusha kune dzinoverengeka nzvimbo dzeyoga hotspots munyika yese. Heano mamwe mashoma eaya mashiripiti eThailand iyo yoga hotspots!
Bangy Bangkok pamwe haisi iyo nzvimbo yekutanga yaunofunga nezvayo kana zvasvika pakusvika payoga mat, asi kupenga kwayo ndicho chikonzero chakanakisa chekubatanazve neako maitiro. Nepo guta guru renyika risinganyatso kupa nzvimbo dzakadzikama dzeyoga iwe yaunowana kumwe kunhu, iro guta rinozvirumbidza mamwe ma studio akaisvonaka.
MuBangkok, varairidzi vanotyisa uye masitudiyo akazvipira - mira mukirasi paYoga Elements inoonekwa se "studio yepamusoro yeBangkok" kana kuti Absolute Yoga kukukwidza muBig Mango usati waenda kunzvimbo yako yekushamisa. Kana, kana iwe uchitsvaga imwe yetsika tsika, tsvaga iyo Iyengar kuyerera ku Empower Yoga.
Crystal yakajeka turquoise mvura, inozungunusa michindwe uye anoyevedza mawere - zvitsuwa zveThai zvinokodzera mukurumbira wavo wese uye zvirokwazvo inzvimbo yakanaka yekudzidzira iyo yoga. Nguva inononoka kudzika pazvitsuwa, zvakasikwa zvakakukomberedza, uye tembiricha inodziya inokubatsira kusunungura uye kunzwa wakasununguka.
Iwe unogona kuwana diki yoga studio uye nharaunda dzehutano munzvimbo zhinji dzezvitsuwa zvinowanzo shanyirwa seKoh Tao, Koh Lanta, uye Koh Samui, asi imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushanyira yakanangana neyoga ndiyo Koh Phangan.
Iine nzvimbo ine hutano yeyoga, Koh Phangan inogara kune dzimwe nzvimbo dzinozivikanwa pasirese kusanganisira dzimbahwe repasi rose reAgama Yoga uye Iyo Sanctuary, inzvimbo inonakidza inopawo detox uye spa kurapwa. Kana iwe uchifarira kupedzisa yako yoga mudzidzisi kudzidziswa mune inokatyamadza yekumaodzanyemba Thailand, tarisa Jivani Yoga.
Chekupedzisira asi zvirokwazvo chisiri chidiki ndeye "Ruva rekumaodzanyemba" - Chiang Mai. Ine huwandu hwevanhu vangangoita mazana maviri ezviuru, Chiang Mai iri kuchamhembe kweguta rakakura reThailand. Makomo aro anotsvaira, mapopoma mazhinji, uye zvinyoro nyoro zvakaba moyo zhinji.
Ini ndinofunga Chiang Mai, pamwe nevamwe vese vekuchamhembe, ndiyo nzvimbo yakanakisa yekubatana zvakare nemasikirwo, yako yoga maitiro, uye iwe pachako. Pane chimwe chinhu chidiki kune wese munhu pano - chikafu chinoshamisa, nzvimbo dzinoyevedza, husiku hunonakidza, uye shaya-kudonhedza nzvimbo - uye inobudirira nyika dzehutano nharaunda.
Enda kune chero kirasi mune imwe yedzimba dzepedyo neGuta Rekare, senge Namo Chiang Mai kana Wild Rose Yoga, uye iwe unozonzwa nekukomberwa nevarairidzi veiyoga vanoshevedza ino nzvimbo yakakosha kumba. Hupenyu hwakadzikira uye kusimbisa pakurarama kwepanyama kunoita kuti kuchamhembe nzvimbo yakakwana yekutarisa pane zvaunoita.